Blogs: बंगुरमा फैलिएको नयाँ रोग PRRS के हो? कसरी सर्छ र किसानले कसरी सुरक्षा अपनाउने त?
बंगुरमा फैलिएको नयाँ रोग PRRS के हो? कसरी सर्छ र किसानले कसरी सुरक्षा अपनाउने त?
PRRS बंगुरमा एउटा भाइरसको कारणले लाग्ने रोग हो जसले मुलत प्रजनन प्रणाली र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्दछ। यो रोग सबै उमेर समूहको बंगुरमा देखिन्छ। मुख्यतः माउ बंगुरमा र कहिलेकाहीं वीरमा समेत प्रजनन क्षमता ह्रास गराउँछ। त्यस्तैगरी, सानो उमेरको बंगुरमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखा पर्छ। कहिलेकाहीँ यी दुवै समस्या एकसाथ देखा पर्छन्। एउटा सङ्क्रमित बंगुरमा यो रोग ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म सक्रिय अवस्थामा रहन सक्छ। रोगी बंगुरको सिँगान, पिसाब, वीर्य, दूध र दिसामा यो भाइरस हुन्छ जसबाट यो रोग एउटा बाट अर्को बंगुरमा सजिलै सर्न सक्छ। वयस्क बंगुरमा मृत्युदर २०% सम्म हुन्छ भने पाठापाठीमा ३० देखि १००% सम्म पनि हुन सक्छ।
यो रोग लाग्दा निम्न लक्षण देखा पर्छन्:
१. भोक नलाग्ने, वान्ता आउने र आलश्यता हुने
२. ज्वरो आउने
३. श्वासप्रश्वासमा कठीनाई हुने
४. केही समयको लागि कान, पेट र सुत निलो हुने
५. माउले भाले नखोज्ने, भाले खोजेपनि बच्चा नबस्ने
६. गर्भ तुहिने, गर्भावस्था पूरा नहुँदै व्याउने र मरेको पाठापाठी जन्मिने
७. पाठापाठी कमजोर हुने र मृत्युदर बढ्ने
भाइरसको कारणबाट लाग्ने हुनाले यो रोगको उपयुक्त उपचार विधि हुँदैन। पशु चिकित्सकको परामर्शमा सेकेण्डरी इन्फेक्सन बाट बचाउन पाठापाठी जन्माएको तेस्रो, सातौं र चौधौं दिनमा लामो समय काम गर्ने oxytetracycline एन्टिबायटिक दिन सकिन्छ। त्यस्तै खोरको जैविक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। रोग देखिएको ८ महिनासम्म त्यो फार्म मा नयाँ बंगुर प्रवेश नगराउँदा भाइरस बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै जान्छ। उपलब्ध भएसम्म खोपको प्रयोग गर्नु सबै भन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। नेपालमा पनि यो रोग फैलिरहेको हुँदा जैविक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। यसको लागि खोरभित्र र वरपर डिस्इन्फेक्टेन्ट स्प्रे गर्न सकिन्छ भने खोर बाहिर, गेटमा, फार्म प्रवेश गर्ने गाडीमा ह्विल डिप तथा फुट डिप वनाउन सकिन्छ।